“Erling Braut Haaland kama tagi doono Borussia Dortmund xagaagan” – Michael Zorc – Gool FM
(Dortmund) 22 Abriil 2021. Agaasimaha Borussia Dortmund ee Michael Zorc ayaa ku adkeystay in Erling Braut Haaland uu la sii joogi doono kooxda inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, xitaa haddii ay seegaan booskooda afarta sare ee horyaalka Bundesliga.
Haaland ayaa rigoore khasaariyey kulankii Union Berlin fiidnimadii xalay, laakiin sidaas oo ay tahay haddana BVB ayaa 2-0 ku guuleysatay, waxaana ay sidaas ku heshay 52 dhibcood xilli ciyaareedkaan, iyadoo afar dhibcood ka hooseeya Eintracht Frankfurt oo kaalinta afaraad kaga jirta horyaalka Bundesliga.
Waxaa jiray talo soo jeedin ku saabsan in ciyaaryahanka reer Norway uu ku qasbanaan karo inuu ka tago garoonka Signal Iduna Park suuqa soo socda, haddii aysan kooxdu ku jirin oo ay u soo bixin tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Si kastaba ha noqotee, Zorc ayaa sheegay in Weeraryahan uu weli baaqi ku sii ahaan doono Dortmund, iyadoo aan loo eegi doonin booska ay ka joogaan miiska kala sarreynta horyaalka.
“Meel kasta oo aan ku dambaynno, Erling Haaland wuu sii wadi doonaa inuu nala ciyaaro,” ayuu Zorc u sheegay Sky Deutschland.
20-sano jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed aad u fiican ku qaadana BVB inta lagu jiro xilli ciyaareedkan 2020-21, isagoo dhaliyay 35 gool, isla markaana diiwaan galiyay 11 caawin 37 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid iyo Barcelona ayaa dhammaantood, waxaa la sheegayaa inay doonayaan inay la soo saxiixdaan weeraryahankan suuqa soo socda.